mmekọahụ na porn | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ: Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home mmekọrịta Mmekọahụ na Porn
Okwu ndị gba ọtọ na-esi na okwu Grik bụ "gba ọtọ" na "graphie" nke pụtara "ihe odide nke ma ọ bụ banyere ndị akwụna".
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka ihe na-akpali akpali na-abanye n'ahụ ya n'ụzọ nkịtị, n'ụzọ ka ukwuu n'ime anya na ntị. O nwere njikọ chiri anya na usoro nlekọta ahụ bụ isi, karịsịa usoro nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụ ebe obi ụtọ nke ụbụrụ. Ọ na-enye agụụ mmekọahụ ngwa ngwa. Mgbanwe nke ngbanwe nke ime ihe na-eme ka ọ dị nso ozugbo: obi na-agba ọsọ ngwa ngwa; iku ume na-abawanye ala ma onye nche na-amalite ịmalite ịda ụda na akụkụ ahụ.
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ taa site na ịntanetị dị iche na foto ndị gba ọtọ n'oge gara aga. Foto ndị dị omimi nke magazin ndị gentlemen ma ọ bụ ọbụna ihe nkiri na-acha anụnụ anụnụ adịghị enwe mmetụta na ụbụrụ nke ntanetị na-adịghị agwụ agwụ nke oge a, vidio ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Njikọ mmekọrịta nke ịntanetị na-enye ndị mmadụ ohere ịmegharị ngwa ngwa na ihe ndị na-adọrọ adọrọ ngwa ngwa ọ bụrụ na ha enwekwaghị nsogbu ụlọ. Ka ndị mmadụ na-ele ọtụtụ porn, obi ha ji nwayọọ nwayọọ amalite ịmepụta obere dopamine na nzaghachi. Nke a na - eme ka belata ọchịchọ maka ihe ha na - ele. Otú ọ dị, ha nwere ike weghachite nguzozi dopamine site na-ekiri ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọ bụ vidiyo ndị dị egwu Ndị a ozugbo na-enye nnukwu 'kụrụ' nke dopamine.
Ahụ na-atọ ụtọ. Mgbe anyị nwere nri zuru ezu, ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ mmekọahụ ụbụrụ anyị na-egosi na o zuola. Ihe mgbaàmà a na-enyere anyị aka ịkwụsị iri ihe, ịṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ inwe mmekọahụ ka anyị nwee ike ịbanye na ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ndụ kwa ụbọchị. Ma mgbe anyị 'binge' na ihe ma ọ bụ omume, a ga-etinye usoro mgbochi nke a ruo nwa oge, ma ọ bụrụ na e nwere ihe mkpali binge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụbụrụ anyị na-akọwa ntinye ụgwọ na ụgwọ ọrụ dịka mkpa 'ịlanarị' ma na-enye anyị ohere ịnọgide na-etinye onwe anyị ruo nwa oge. Were anya anụ ọhịa bea tupu ya ekpoo oyi maka oyi, ọ nwere ike ilo salmon 20 n'enweghị ọrịa.
Ọtụtụ ndị na-amaghị nwoke na-eto eto taa na-eji porn maka agụmakwụkwọ banyere mmekọahụ na maka obi ụtọ. Ha na-ele ya naanị ya. Omume a na-eme ka a na-enwe mmekọahụ na-emetụ ha n'obi ogologo oge iji atụ anya ihe mkpali na-akpali akpali. Ọ nwere ike iduga na mmepe nke nwa ebu n'afọ, mgbanwe ndị a na-atụghị anya ya na agụụ mmekọahụ na ụta na ụfọdụ. Nke a na-emetụta ndị okenye, ọtụtụ n'ime ha malitere ile egwu porn site na nwata. Ụdị ụbụrụ a na-anapụ onye nche nke uru ahụike, mmepe onwe onye na ọtụtụ ihe ụtọ nke ezigbo mmekọrịta.
Ọtụtụ ndị nwoke na-egwu egwu na-eme nke a site na 'edging' na vidiyo ọ bụla, nke a na-eme ka ọ bụrụ nke na-agwụ aghara ma ọ bụghị nke ọma. Nke a na-enye ha ohere isoro ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ ruo ọtụtụ awa na awa. Ndị ọrụ na-achọ ihe oyiyi ahụ zuru oke ka ọ kwụsị. Ha anaghị eche na ha ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha na nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha enwe mmekọahụ na-eru nso.
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n ’Intanet dị ka oge ịlụ, ma oge ịlụ di na nwunye nke na-anaghị akwụsị akwụsị. Brainbụrụ oge ochie na-ahụ ya dị ka 'inye nri nri', nnukwu ohere njikọta fatịlaịza wee gbanwee usoro satiation. Thebụrụ na-achọzi ime mgbanwe maka nke a tupu oge a kari bonanza - ndị di na nwunye na-adịghị agwụ agwụ na-achọ njikọta njikọta nke anyị nwere ike igosipụta agụụ mmekọahụ anyị.
Site n'inwe agụụ mmekọahụ nke ịntanetị na-eme ka ndị ọbịa ghara ịba uru na uru anyị. Ịgba egwu ịntanetị dị oké njọ bụ ihe na-emerụ ahụ maka ndị na-eto eto bụ ndị a na-eji obi ha eme ihe maka inwe mmekọahụ ka ha na-akwado maka ịghọ okenye. Ha na-amụta ịgbanye ụbụrụ ha ka ha nwee ike ịme ihe. Kama ịmụta otú ị ga-esi na-achụ ntaramahụhụ, nọgide na-ele anya na-ele anya, ịzụlite nkwanye ùgwù ma metụ aka n'ụzọ ịhụnanya ma ọ bụ n'ụzọ mmekọahụ na ezigbo ndị mmekọ nwere ike, ndị mmadụ na-ewusi ụzọ ike maka ụgwọ ọrụ.
<< Ibelata Ọchịchọ Mmekọahụ